RASMI: Barcelona oo shaacisay in Arthur Melo uu ku biiray kooxda Juventus - Hargeele - Wararka Somali State
RASMI: Barcelona oo shaacisay in Arthur Melo uu ku biiray kooxda Juventus
(Spain) 29 Juun 2020. Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in xiddigeedii qadka dhexe reer Brazil ee Arthur Melo uu ku biiray naadiga Juventus maanta oo isniin ah.
War rasmi ah ee lagu daabacay website-ka kooxda Barcelona ayaa lagu sheegay:
“Barcelona iyo Juventus waxay gaareen heshiis rasmi ah si uu ugu biro Arthur Melo naadiga reer Talyaani qiimo dhan 72 million euros, waxaa intaas sii dheer 10 million euros oo ah kala wareejinta”.
Hadalkan oo sii socda ayaa waxaa lagu sii daray:
“Ciyaariyahanku wuxuu kusii nagaan doonaa kooxda Barcelona ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan 2019/2020”.
Arthur Melo ayaa ku biiray Barcelona xagaagii 2018, isagoo kaga soo dhaqaaqay naadiga reer Brazil ee Gremio, wuxuuna ku ciyaaray maaliyada Blaugrana 72 kulan.
Melo ayaa u dhaliyay kooxda Barcelona 4 gool labadii xilli ciyaareed uu lu qaatay Barca, wuxuuna kula guuleystay laba koob oo mid ka mid ah uu yahay horyaalka La Liga, iyo Spanish Super Cup xilli ciyaareedkii 2018-2019.
Danjiraha JFS ee dalka Suudaan oo la kulmay Mr. Brain+Sawirro
Dele Alli & Wan-Bissaka oo laga saaray liiska xiddigaha xulka England ee ka qeyb galaya kulamada isreebreebka ee Euro 2020
Horudhaca kulanka Premier League ee Kooxaha Chelsea vs Brighton & Hove Albion… (The Blues oo eegeysa guusheedii ugu horreysay horyaalka ee Stamford Bridge)